Showing १४१-१५० of २,९९८ items.
गाउँवासीको प्रश्नः सिंहदरबार आयो कि भ्रष्टाचार ?
भण्टाबारी । सङ्घीयताको आगमनसँगै स्थानीय चुनावको चहलपहल हुँदा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–८ का खुर्शिद मन्सुरी जति उत्साहित थिए अहिले त्यति नै निराश छन् । करिब दुई दशकपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिसँग उनले ठूला अपेक्षा राखेका थिएनन् । हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे हुने सडक मर्मतको माग चुनावकै बेला उनी र उनका छिमेकीले गरेका थिए । तर जनप्रतिनिधि आएको चौथो वर्ष चलिरहँदा पनि उनीहरूको माग पूरा भएको छैन । सडक अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । ‘जनप्रतिनिधिले गाउँबासीको आवश्यकता र हितलाई हेरिँदैन, आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता जता छन् त्यतै बजेट विनियोजित गरिन्छ’–मन्सुरीले भने । वडाध्यक्ष, गाउँपा
गोरु काटेको अभियोगमा तीन पक्राउ, धरौटी निकाल्न नसक्दा २ जना जेल चलान
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा गोरु काटेको अभियोगमा तीन जना स्थानिय पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धनपा–६ कचिडेका सिरानका वर्ष ३०का अमर मग्राती , वर्ष २२ का विकास विसुंखे र वर्ष ३७ का भेषबहादुर भनिने सिमन विसंखे रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।जिल्ला अदालत धनकुटामा विहिवार उपस्थित गराईएका उनीहरुलाई जनही ६० हजारका दरले धरौटी तोकेको थियो । जसमध्ये सिमनले मात्र धरौटी रकम ६० हजार बुझाएकाले तारेखमा छुटेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अन्य दुई जना अमर र विकास भने अदालतले तोकेको धरौटी रकम वुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका छन् । नेपालक
विराटनगर । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी अधिकृत सरोज सुवेदी दुई लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीस्थित कार्यालयले स्टिङ अप्रेसनका क्रममा सुवेदीलाई भर्खरै पक्राउ परेका हुन् । बन्द भएको औषधि पसललाई खुलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गर्दा उनी रंगेहात पक्राउ परेका हुन् । मोरङ उर्लाबारी–५ हाटखोला निवासी २४ वर्षीय सुवेदीले बन्द भएको औषधि पसल खुलाउनका लागि घूस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको हो । यसविषय थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।
ब्लाष्टखबर । आफ्नै बुबाकाे हत्याकाे आराेपमा ३४ वर्षीय छाेरा पक्राउ परेका छन् ।५८ वर्षीय जुम बहादुर कामीको हत्या गरेको अभियोगमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ पाउँदुरकोट घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका–३२ महकुना बस्ने रामकृष्ण कामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे । आइतबार राति बाबु छोराबीच विवाद हुँदा रामकृष्णले काठले प्रहार गर्दा बाबु जुम बहादुरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएकाे छ । कार्यलयका अनुसार घरको भर्‍याङबाट लडेर जुम बहादुरको मृत्यु भएको भन्ने खबर पाएसंगै पुगेकाे प्रहरी टाेली घटना शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धान अनुसन्धान गर्दा हत्या भएकाे खुलेकाे हाे । घटनास्थल
अदालतदेखि फरार भएका थुनुवा भारतबाट पक्राउ
अनिल श्रेष्ठविराटनगर/ मोरङ अदालतमा पाँच दिनको म्याद थप भएपछि खाजा खाने बहना बनाएर डियुटिमा खटिएको प्रहरीलाई झुक्याएर अदालत परिसरदेखि फरार भएका एक जना थुनुवा पक्राउ परेका छन् । फरार भएका दुई जना थुनुवा मध्ये एक जनालाई प्रहरीले मंगलबार साझ पक्राउ गरेको हो । लागूऔषध मुद्दामा मोरङ अदालतमा सोमबार पाँच दिनको म्याद थप भएपछि खाजा खाने बहना बनाएर प्रहरीलाई झुक्याएर मोरङको कटहरी गाउँपालिका–४ का ३७ वर्षीय मुराज भनिने मनराज शेख र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ का २० वर्षीय प्रकाश चौधरी फरार भएका थिए । फरार भएका मध्ये शेख पक्राउ परेको मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । पक्
कञ्चनपुर। बेलौरी नगरपालिका–६ भुरकोटकी एक महिलाले फरुवा प्रहार गरी आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरेकी छन् । आज बिहान २८ वर्षीया वसन्ती चौधरीले ३० वर्षीय आफ्ना श्रीमान् ओमकुमार चौधरीको फरुवा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले घरायसी विवादमा वसन्तीले फरुवा प्रहार गरेको भन्ने बुझिएको बताए । “बिहान ५ बजे घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीको टोली पुगेको छ”, उनले भने, “फरुवा प्रहार गर्ने वसन्तीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा शव घरभित्रै फेला परेको छ ।” यसैबीच घरायसी विवादमा बुहारी र नातिले कुटप
प्रवीण बास्तोला मृत्यु प्रकरण: मिसिलमा तस्बिर परिवर्तन भएपछि...
पथरी। मोरङको उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रवीण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणको मिसिलमा अर्कै व्यक्तिको तस्बिर संलग्न गराइएपछि घटनाले नयाँ रूप धारण गरेको छ । मृतकका परिवारले आरोपीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मिसिलमा अर्कै व्यक्तिको तस्बिर टाँसिएको जानकारी पाएलगत्तै आफन्त तथा स्थानीय छिमेकीले उर्लाबारीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयअगाडि आइतबार र सोमबार प्रदर्शन गरे । शङ्कास्पद मृत्यु भएका प्रवीण बास्तोलाको अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीले मिसिल फाइलमा २ महिनापछि असम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर रहेको आफन्तले फेला पारेपछि प्रहरीवि
धरान । मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय प्रवीन बास्तोला मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । त्यसघटनामा प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पछि २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धानपश्चात् सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङको निर्देशनमा हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । बास्तोलाको मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका युवालाई छाड्न उर्लाबारीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले भूमिका खेलेको मृतकका परिवारको आरोप छ । मृतकका आफन्त तथा छिमेकीहरू उर्लाबारीस्थित इप्रकामा घेराउ तथा धर्नामा छन् । घटना पुस ५ गतेको हो । प्रवीनको मृत्युपछि मृतकका बुबा प्रेमप्रसाद बास्तोलाले पुस २२ गते कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा उ
ब्लाष्टखबर । मोरङ कटहरी गाउँपालिका २ का ३३ बर्षीय धनिराम चौधरी, ३७ बर्षीय मनराज शेख र २३ बर्षीय कैलाश मण्डल लागुऔषध खैरो हिरोईन सहित पक्राउ परेका छन् । आईतबार दिउसो साढे ३ बजे कटहरी गाँउपालिका – ४ स्थित चमराही चौकबाट लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्लास्टिकले बेरीएको अवस्थामा खैरो हिरोईन ८ ग्राम र डिजिटल काटा थान १ सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । त्यस्तै, सिराहा मिर्चैया नगरपालिका –६ बस्ने २८ बर्षीय ब्रमदेव यादव लागुऔषध डाइलक्स डिसीसहित पक्राउ परेका छन् । हिजो साँझ साढे ५ बजे यादवलाई स ८ प ४५३७ नम्बरको मोटरसाईकलमा मिर्चैयाबाट कटारी जा
ताप्लेजुङमा अबैध नवजात शिशु हत्याको अभियोगमा दुई महिला पक्राउ
ताप्लेजुङ । आफैँले जन्माएको नवजात शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा ताप्लेजुङ प्रहरीले दुई महिला पक्राउ गरेको छ । मेरिङ्देन गाउँपालिका–२ सान्थाक्राकी २२ वर्षीया स्याङ्मु शेर्पा र फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजेनिमकी ३७ वर्षीया लाक्पा दिकी शेर्पालाई आईतबार पक्राउ गरेको हो । दुवैलाई अवैध रुपमा बच्चा जन्माएर हत्या गरेको अभियोग छ । स्याङ्मुले गत माघ २२ गते अवैध नवजात शिशु जन्माएर हत्या गरेको प्रारम्भिक बयानमा स्विकारेको ताप्लेजुङ प्रहरीले जनाएको छ । गत माघ ३० गते अलैची बगानभित्र नवजात शिशुको शव भेटिएको थियो । शवको जिल्ला अस्पतालमा पोष्टमार्टमपछि मेरिङदेन गाउँपालिकाले अन्त्यष्टि गरिसकेको छ । उता फक्ताङ्लुङ ग